Zvakachengeteka kufunga kuti sehuwandu hwevanhu, vachatoda zvekurapa zvekushandisa kumba uye zvekushandisa. Asi izvi zvekushandisa hazvisi zvevakuru chete. Kurwara, chirwere, kukuvara nekuremara hazvina muganho wezera.
Kana rudo rwako rukazoda zvekurapa zvekumba, kutsvaga izvo inishuwarenzi inovhara zvichabatsira kudzikisa mutengo wako.
Medicare chirongwa cheinishuwarenzi chehutano chenyika yose kune avo vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa. Vamwe vanhu vari pasi pemakore makumi matanhatu nemashanu vanogona kuvharwa zvichienderana neMedicare inokodzera kuremara kana chirwere.
Medicare inovhara marudzi akasiyana ezvigadzirwa zvekurapa uye zvekushandisa pamwe nezvakakodzera magwaro senge mushonga kubva kuna chiremba kana Chitupa chekurapa Zvakakosha.
Medicare Chikamu A chinovhara avo vari muchipatara, kuchengetwa kwehutano hwepamba kana imba yevanotarisira vakwegura. Kana zvisiri Medicare Chikamu B chingavhara zvekurapa nemidziyo.
Medicare ichafukidza zvinotevera zvekurapa zvekushandisa nemidziyo:
Ostonomy inopa uye mabhegi, kudiridza, kufuridza michina, uye zvekushandisa
Zvinhu zvinodikanwa pakudyisa machubhu (senge catheters, mafirita, uye mhinduro dzemuviri)
Zvishandiso zve tracheotomy kurapwa
Kupfeka kunodiwa pakurapwa kwe kuipa semhedzisiro yekuvhiyiwa kana mushure mekubviswa (kubvisa zvisikwa zvisina hupenyu zve kuipa)
Diabetic zvigadzirwa, glucose metres uye Diabetic Shangu
Midziyo yekufema yakadai semidziyo yeoksijeni midziyo & zvishandiso zveapnea ekurara
Chinyorwa kana chemagetsi mavhiripu, uye nemota scooter
Zvimwe zvekushandisa nemidziyo zvinogona kuverengerwa kana zvichinge zvaratidza kuti zvinodiwa pakurapa uye chiremba wako akazvinyora munhoroondo yako yekurapa.
Mimwe michina yekurapa inoonekwa seyako "zviri nyore" uye haina kuvharwa neMedicare. Heano zvimwe zvinhu zvisina kuvharwa:
Yakasimudzwa chigaro chimbuzi
Shower / commode wiricheya
Bata mabhawa uye zvimwe zvekuchengetedza midziyo yekugezera
Incontinence zvinhu zvakadai semapfupi uye pasi pemapadhi
Tsvaga kumberi kwenguva kuti Medicare ichavhara zvakadii uye uve nechokwadi kuti iwe uri nemazvo yose iro rese basa rinodiwa remapepa.
Iyi ndiyo nyika inomhanya inishuwarenzi chirongwa uye inosiyana kubva kudunhu kuenda kudunhu. Iwe unenge uchinyanya kuda kubvumidzwa pamberi penguva kubva kuMedicaid usati waisa odha yezvokurapa zvekushandisa nemidziyo. Chiremba wako anofanirawo kupa tsananguro yakanyorwa ye:
Yako yekurapa kuongororwa uye kufungidzira
Mashandisiro anoita maturusi / zvishandiso kupora uye / kana hupenyu hwezuva nezuva mashandiro
Inotarisirwa mhedzisiro yekushaikwa kwemidziyo / zvigadzirwa kana kusashandisa iyo yakataurwa michina / zvigadzirwa
Kana uchitsiva michina isingadhuri isingagutsi, tsanangura nei
Nguva yenguva iyo michina inodiwa
Wanga uri kana uchazodzidziswa mukushandisa zvishandiso nemazvo uye kuti iwe unogona kuzviita